Mampisondrotra ny ambaratonga fampitandremana momba ny dia mankany Torkia ny US Travel Advisory
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mampisondrotra ny ambaratonga fampitandremana momba ny dia mankany Torkia ny US Travel Advisory
Febroary 16, 2019
fampitandremana momba ny dia
Ny departemantam-panjakana misahana ny fitsangantsanganana amerikana, Bureau of Consular Affairs, dia namoaka mpanolotsaina "Haavo 3: Diniho indray ny dia" ho an'i Torkia noho ny asa fampihorohoroana sy ny fitazonana am-ponja tsy ara-dalàna an'ireo faritra sasany izay nitombo ny risika.
Mampitandrina ny mpanolo-tsaina ny tsy handehanana any amin'ny faritra akaikin'ny sisin-tanin'i Syria sy Irak noho ny fampihorohoroana satria ny vondrona mpampihorohoro dia manohy mikononkonona fanafihana mety hatao any Torkia.
Mitohy ny fampitandremana: ny mpampihorohoro dia mety hanafika tsy misy fampitandremana kely na tsy misy, mikendry ny toerana fizahan-tany, tobim-pitaterana, tsena / toeram-pivarotana, tranom-panjakana, hotely, klioba, trano fisakafoanana, toeram-pivavahana, zaridaina, hetsika ara-panatanjahantena ary kolontsaina lehibe, andrim-pampianarana, seranam-piaramanidina ary faritra hafa ho an'ny daholobe. Ny mpampihorohoro koa dia nikendry ireo mpizahatany tandrefana sy mpila ravinahitra taloha.
Notazomin'ny mpitandro ny filaminana ny olona an'aliny, isan'izany ny olom-pirenena amerikana, noho izy ireo voalaza fa nifandray tamin'ny fikambanana mpampihorohoro miorina amin'ny porofo kely na miafina ary antony toa misy ambadika politika. Ny olom-pirenena amerikanina koa dia iharan'ny fandrarana mandrara ny fivezivezena hanakana azy ireo tsy hivoaka an'i Torkia. Ny fandraisana anjara amin'ny fihetsiketsehana tsy eken'ny Governemanta Torkia mazava, ary koa ny fitsikerana ny governemanta, anisan'izany ny media sosialy, dia mety hiteraka fisamborana.
Ny governemanta amerikana dia voafetra ihany ny fahafahany manome serivisy vonjy maika ho an'ireo teratany amerikana mandeha any Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt, Sirnak, Tunceli, ary Van, satria ny governemanta amerikana dia mametra ny mpiasan'izy ireo manomboka amin'ny dia mankany amin'ny faritany manokana any amin'ireny faritra ireny nefa tsy nahazo fankatoavana mialoha.
Vakio ny fizarana momba ny fiarovana sy fiarovana amin'ny tranokalan'ny governemanta amin'ny pejy fampahalalana momba ny firenena.
Mampitandrina ny tranonkala: Raha manapa-kevitra ny ho any Torkia ianao:
Mijanona ho mailo hatrany amin'ny toerana be mpandeha matetika ny Tandrefana.
Aza manao fihetsiketsehana sy vahoaka.
Mijanona ao amin'ny hotely misy fepetra fiarovana azo fantarina.
Araho maso ny haino aman-jery eo an-toerana ary ampifanaraho amin'ny vaovao ny drafitrao.
Tsidiho ny tranokalanay ho an'ny Mandehandeha any amin'ny faritra misy risika be.
Misoratra anarana ao amin'ny Programme fisoratana anarana ho an'ny mpitsangatsangana(STEP) handraisana Fanairana ary hanamora ny fitadiavana anao amin'ny toe-javatra maika.
Araho ny Departemantam-panjakana amin'ny Facebookary Twitter.
Avereno jerena ny Tatitra momba ny heloka bevava sy ny fiarovanaho an'i Turkey.
Ny olom-pirenena S. izay mivezivezy any ivelany dia tokony hanana drafitra tsy ampoizina amin'ny toe-javatra vonjy maika. Avereno jerena ny Lisitry ny lisitry ny mpitsangatsangana.
Faritra akaikin'ny sisin-tany Syriana sy Iràka - Haavo 4: Aza mandeha
Aza mandeha akaikin'ny sisintanin'i Torkia / Syria sy Torkia / Iràka noho ny fandrahonana mitohy amin'ny ady an-trano any Syria sy ny fanafihan'ny vondrona mpampihorohoro. Fanafihana mpampihorohoro, anisan'izany ny baomba famonoan-tena, fisamborana, fanapoahana baomba fiara, fitaovana fanapoahana baomba, ary koa fitifirana, fanakanan-dalana, ary fihetsiketsehana mahery vaika nitranga tany amin'ireo faritra ireo.
Ao amin'ny tit-for-tat hafahafa, nogadrain'i Okraina, nandà ny fidirana amin'ireo mpizahatany israeliana
Trano fandraisam-bahiny: mirary soa sa manao veloma?